Indlela yokufunda inkondlo enganeni yengane yasenkulisa
Kuyaziwa ukuthi ukwakhiwa kwamakhamera okucwaningwa kwamabhuku kuqhutshwa yizinkondlo. Iqala ukuthuthuka ngokweqile ezinganeni emva konyaka nengxenye. Lokhu kubaluleke kakhulu ekufundeni okuphumelelayo esikhathini esizayo. Ngakho-ke ungayifunda kanjani inkondlo enomntwana oneminyaka yasenkulisa? Sizozama ukuqonda futhi sinikeze iseluleko ngokukhumbula ngehlazo.
Izici zomuntu ngamunye zezingane
Yiqiniso, akuzona zonke izingane ezikhumbula ngekhondlo inkinga. Ezinye izingane zikhumbula ngokushesha ukuthi zithandwa kakhulu. Emindenini lapho abazali nezihlobo bavame ukukhuluma nengane, bafunda, izingane seziqedile umgca "Ngithanda ihhashi lami" enkondlweni kaBarto kakade ngonyaka ongu-1.
Kodwa kunezingane okuzobamba izinkondlo ngokuzikhandla nje. Ngokuvamile lokhu kungenxa yokuthi akafundisani kahle inkondlo noma imbongi ayihambisani naye ngobudala nobubele. Kukhona amathiphu amanye alula ukukusiza ufunde ivesi.
Amathiphu okusiza ukufunda izinkondlo
Ukuze inkondlo yokufunda kalula, kufanele, ngokufanayo, ihambisane nobumnene nobudala bomntwana. Akusikho isidingo sokuphoqelela umcibisholo oneminyaka emihlanu ukuthi ufunde izingcaphuno ezivela ku "Mtsyri" ngokuzijabulisa kwezivakashi. Ezikhathini zasenkulisa, izingane zakudala zezingane zeBarto, i-Mikhalkov, i-Chukovsky zifaneleka kangcono. I-tempérament nayo ibalulekile ukucabangela, ngakho izingane ezinokuthula zizokhumbula kangcono amavesi agelezayo, amazinga, nama-pranksters - ajabule futhi anesigqi. Yiqiniso, esikoleni akekho ozobheka ngobumnene bawo, kodwa okwamanje ingane ifunda nje ukufunda. Ngakho-ke, kungcono ukukwenza njengoba seluleka. Esinye isisusa sokufundisa izinkondlo yisipho somuntu: usuku lokuzalwa lomama noma ubaba, ugogo noma ukufika kukaSanta Claus. Inqubo yokukhanda ngekhanda ukuthi kulula ukufundisa indaba esiyithandayo. Ngakho-ke, zama ukuthola inkondlo ezithakazelisayo yengane yakho.
Umuntu omdala ofundisa inkondlo enganeni kufanele afunde ngezwi. Bese uqiniseke ukuthi uthola futhi uchaze lawo mazwi embhalweni ongahle awucacise ingane. Uma konke kucacile, funda inkondlo, ubeke zonke izikhalazo. Qinisekisa ukungitshela uma kudalwe futhi obhala lo msebenzi othakazelisayo. Khombisa imifanekiso yomculi, enamathele kule nkondlo, kanti ngenkathi ingane izobubuka, funda inkondlo kancane kancane. Lona msebenzi wokuqala owenza isithombe somsebenzi futhi usebenze ngekhanda lakhe.
Imvelo yabantwana injalo ukuthi kufanelekile ukubamba ngekhanda inkondlo enomqondo nangokomzwelo, kungenjalo ngeke kube yintfo ezinganeni. Ingane, njengoba enganeyingane, engangenanga ubuhle bendlela yokubhala yevesi njengomuntu omdala, ayengavamile ukuphenduka izinkondlo.
Zonke izingane, kanye nabantu abadala, banezici zabo ezikhethekile zokukhumbula. Kunezinhlobo ezintathu: izibonisi ezikhunjulwa kangcono uma zibona izakhamuzi ezikhishwe ngekhanda nezakhi zesikhumba ezikhumbulayo kangcono uma zingabanjwa ngezandla noma zithinteke.
Izindlela zokwamukela ngekhanda
Kuzobukwayo, umsizi oyinhloko isithombe: noma sidonselwa ngabazali, noma encwadini. Ngisho noma ungazazi ukudweba - akunandaba, izingane ngokwazo ziyakuthanda inqubo yokudweba.
Ukuhlolwa kudingekile ukubiza umbhalo ngokomzwelo futhi njalo ngezindlela ezehlukene, isibonelo, njenge-bunny, futhi njengenhlanzi, futhi ngokuzwakalayo, nangokukhalaza. Ukuthintana okuhlukahlukene kuzoba ngabasizi abakhulu bokuhlinzeka ngezidakamizwa. Zizoba yisikhumbuzo salokho okuzoxoxwa kamuva kule nkondlo.
Uhlobo lomntanakho luzikhethela wena. Udinga nje ukunaka indlela akhumbula ngayo kangcono, okuthandayo okunye. Kuyoba indlela ephumelela kakhulu yokukhumbula esikhathini esizayo.
Futhi isihloko sokugcina. Ngombongo ngamunye ufunde, udwebe isithombe, usayine umbhali negama levesi. Bese ubeka imidwebo kubaba futhi ngezikhathi ezithile uzicabangele nengane, ukhumbule lezo zinkondlo ozitholile futhi uzifunde ngenhliziyo. Lena indlela enhle yokusekela imithwalo yezinkondlo kanye nomthamo wememori wengane.
Ukukhathazeka kwabantwana abaneminyaka engu-7
Amathoyizi yizokuzijabulisa okuthandayo kwengane
Iseluleko sengqondo sabazali abanesikhathi esincane sezingane
Indlela yokusebenzisa umshini wokulinganisa ngendlela efanele
Kungani izingane zifana nezinganekwane?
Indlela yokwelula ama jeans: izindlela eziyisisekelo
Amaqebelengwane angama-walnut nge-sauce ukhilimu
Isinkwa esigcwele ama-truffles
Anna Semenovich, impilo yomuntu siqu
Umninindlu uyisabelo somuntu "ongeyena"?
Abazali baphendula izwi ngokuqeda iziqu enkulisa - ekuhlabeleleni izingoma, amavesi kanye neprose
Indlela yokuzivumelanisa nobuhlobo obusha bokuthandana
Izinsuku zomjikelezo kanye nesimo sakho sengqondo socansi
Ukwandiswa kwegesi ekwakheni nasemathunjini
Ukutheleleka ngezibungu: kanjani ukugwema?